Internetska stranica eweta na blogu gị ọ dị mfe ịchụ ego karia ịmalite azụmahịa omenala ma ị gaghị eleba iwu iwu mkpochapụ anya ma ọ bụ tinye maka ikikere ụlọ.
Otú ọ dị, nke ahụ apụtaghị na iwu adịghị mkpa ịkwesịrị ime.
Otu n’ime iwu iwu kachasị mkpa ma dị mkpa bụ iwu nzuzo, nke a na-emetụta weebụsaịtị, nnukwu ma ọ bụ obere. Ọ bụrụ na ị bụ obere azụmahịa ma ọ bụ ọbụnadị bloger na-enweghị ego stranice na ebe nrụọrụ weebụ gị ma ejighị n’aka ihe kpatara ụwa na mbụ ị ga-achọ otu, ị nwere ike ijuanya.
Ohere dị elu nke na ị ga – adị (ọ bụrụgodị na ị maghị ya) – ichikota ụdị ozi dị iche iche site na ndị ọbịa gị, na – edebe ha nchịkọta, ma ọ bụ na – egosipụta mgbasa ozi. Maka ọtụtụ n’ime ihe omume ndị a, ohere ndị dị elu dị elu na achọrọ ka ị nwee iwu nzuzo.
1.1 Podaci = Ego
1.2 Iwu nzuzo na mba dị iche iche
Iwu nzuzo bụ akwụkwọ na-akọwa ihe gbasara ozi nkeonwe ị nakọtara site n’aka ndị ọrụ gị, otu ị si eji ya, na otu ị si edebe ya.
Ihe obula a choro bu dabere na iwu ma obu iwu ndi ozo. Ọzọkwa, nkọwa nke ihe bụ "ozi nkeonwe" dịgasị, mana ọ na-agụnye aha na adreesị email, na mgbe ụfọdụ, adrees adre IP na kuki nchọgharị.
Podaci = Ego
Na ọmụma, podaci bụ ego ọhụrụ. Ozi nzuzo nke ndị mmadụ n’otu n’otu bara ezigbo uru nye ndị mgbasa ozi, ụlọ ọrụ, na gọọmentị.
Taa, ọtụtụ mba na-eleba anya na nzuzo dị ka ikike dị mkpa nke ụmụ mmadụ, ha agafewokwa iwu iji chebe ndị mmadụ site n’ihe ọmụma ha na-anakọta ma jiri na-enweghị ihe ọmụma ha. Iwu nzuzo nzuzo na-achọkarị na onye ọ bụla na-anakọta glede nkeonwe stranice na ebe nrụọrụ weebụ ha ga-enwe nkwupụta na otu na ihe kpatara ha ji eme ya.
Dịka ọtụtụ iwu nzuzo, ị nwere ike ikpebi ma ọ bụ ọbụna na-eme mkpesa ma ọ bụrụ na ịnakọta obzirom nkeonwe na-agwaghị ndị ọrụ gị, ma ọ bụ ma ọ bụrụ na ị mebie.
Iwu nzuzo na mba dị iche iche
Iwu Nzuzo Australia (APPs) bụ nchịkọta nke ụkpụrụ 13 na-eduzi njikwa ozi nkeonwe. Dịka ụkpụrụ ndị a si dị, ị ghaghị ijikwa obzirom nkeonwe na ụzọ a na-emeghe na nke a na-emeghe.
Podaci o podacima Europske unije 1998 ekwu na onye ọ bụla nhazi podataka nke onwe ya aghaghị ime ya n’ụzọ ziri ezi ma kwadoro. Iji mee ka nchịkọta data weere ya dị ka iwu kwadoro, ga-anakọta data nanị maka akọwapụtara nke ọma, nke doro anya na nke ziri ezi.
Nzuzo UK na Usoro Ntanetị Electronic 2003 na-egbochi ojiji nke kuki na teknụzụ ndị yiri ya na ngwaọrụ ndị ọrụ ọ gwụla ma ndị ọrụ 1) doro anya banyere nzube nke ojiji nke kuki na 2) enyewo nkwenye ha.
Tinye aha njirimara weebụ gị,
Tinye ọrụ (ntụgharị Google Adsense)-na-eji na ịdị podacima ị na-anakọta,
Ịmepụta nzuzo nzuzo na asụsụ asatọ dị iche iche maka ebe nrụọrụ weebụ na ngwa ọdịnala na-eji Iubenda (lee ngosi).
Akụkụ kasị mma nke iubenda – iwu nzuzo gị ka akwadoro na sava ha. Nke a pụtara na usoro ahụ nwere ike ịmepụta ederede iwu mgbe ọ bụla iwu gbanwere.
Karịa ọrụ 600, gụnyere Facebook Like, Google Adsense, Google Analytics, gumb LinkedIn, Twitter, Alexa Metrics, Amazon Associates; edozi ya na usoro ozo.
Azịza nkwụsị – Ee. Iubenda na-enye ngwọta zuru oke iji soro GDPR.
Na ego nke $ 39 / mjesečno (ouch!), Usoro ahụ ga-enyere aka:
Gosipụta ọkọlọtọ kuki na ịhapụ kuki njirimara naanị mgbe e nyere nkwenye, na
Sochie, ndekọ, ma weghachite njirimara onye ọrụ na ngwaọrụ nchịkwa Nzuzo.
Web lokacija: www.shopify.com/tools/policy-generator
Shopify na-enye ngwá ọrụ dị mfe ebe ị nwere ike ịmepụta nkwụghachi ụgwọ na usoro nke iwu ọrụ maka n’efu.
Ọ bụ ezie na we nwere ike ịdị ka nsogbu, iwepu akụkụ a dị mkpa nke blog gị nwere ike ibute nsogbu n’ọnọdụ. Stvarnoọọghị ihe ọ bụla ịchọrọ ka amachibido ya na netwọkụ Mgbakwunye gị ma ọ bụ ịbụ onye onye ọbịa websaịtị na-agba akwụkwọ.
Chebe onwe gị site na iji otu n’ime ngwaọrụ ndị dị n’elu iji mepụta iwu nzuzo gị ugbu a, ị gaghị echegbu onwe gị! Usoro ahụ ga-enyekwara gị aka ịmata onwe gị na nkọwa bara uru na nzuzo onye ọrụ.
Njikọ ọsọ Inweta egó síða á blogginu gị ọ dị mfe ịchụ ego karia
Njikọ ọsọ Inweta ego -sivusto blogi gị ọ dị mfe ịchụ ego karia ịmalite
Contents0.1 "Mee ka ọ dị mfe, onye nzuzu"1 Ịghọta Ihe Ndị Dị Mfe1.1 Ihe
Telah na-agbagharị blog gị nwa oge wee nwee ohere ịgwa ndị na-agụ akwụkwọ gị